ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page7| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
20.5.2020 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
● Vitamin C ကြွယ်ဝတဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ကီဝီ၊ စတော်ဘယ်...
19.5.2020 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မွေးစထဲက ပါလာတတ်တဲ့ အနီ ဒါမှမဟုတ် အပြာရောင် အမှတ်လေးတွေ ရှိတတ်ကြပြီး ဒါတွေဟာ သွေးကြောမျှင်လေးတွေ ဖွဲ့စည်းပုံ မမှန်တာကြောင့...
18.5.2020 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
>> ဘာလို့ နို့ပြန်အန်ထွက်တာလဲ?
● အစာတွေ ပြန်မတက်လာအောင် တားပေးတဲ့ အစာအိမ်ရဲ့အဝမှာရှိနေတဲ့ အဆို့ရှင်လေးက ကောင်းကောင်း မဖွံဖြိုးသေးတာကြေ...
17.5.2020 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
● ဒဏ်ရာသေးရင် - ဒဏ်ရာကို ရေရယ်၊ ဆပ်ပြာရယ်နဲ့...
အရွယ်နည်းနည်းရလာတဲ့ ကလေးတွေကို ပေးလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေ
1. မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေကို ကိုင်ခိုင်းပါ။ ကလေးတွေက မီးဖိုချောင်ထဲက အလုပ်တွေကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ ဓားတွေ၊ ခရင်းတွေ၊ မီးဖိုတွေရှိလို့...
16.5.2020 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးကို နားထဲကို လက်နဲ့နှိုက်ဖို့၊ နားကလော်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ခိုင်းသင့်ပါဘူး။ ဒါဟာ အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ အပြုအမူ ဖြစ်ပါတယ်...
ကလေးငယ်များတွင် အဖြစ်များသော ဝေဒနာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လည်ချောင်းနာခြင်းဟာ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တတ်ပြီး ပိုးရှိနေသူ ကလေး...